Izay nolazain'i Dr. Faustus tsy nahalala - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
haino aman-jery > Journal succession > 2015-02 mpandimby ny Magazine > Inona no Dr. Faustus dia tsy nahalala
Raha miresaka momba ny literatiora alemà ianao, dia tsy azonao tsinontsinoavina ny angano momba ny Faust. Maro ny mpamaky ny Succession nandre momba io lohahevitra manan-danja io avy amin'i Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) nandritra ny andro nianarany. Fantatr'i Goethe ny angano an'i Faust tamin'ny alalan'ny seho saribakoly, izay niorina ho tantara ara-moraly tamin'ny kolontsaina Eoropeana hatramin'ny Moyen Âge. Tamin’ny taonjato faha-20, i Thomas Mann nahazo loka Nobel dia namelona indray ny tantaran’ilay lehilahy nivarotra ny fanahiny tamin’ny devoly. Ny angano an'i Faust sy ny fifanarahana amin'ny devoly (amin'ny teny anglisy dia antsoina koa hoe Faustian bargain) dia nanohy ny hevitra momba ny 20. Century, ohatra tamin'ny fanolorana ny National Socialism tamin'ny 1933.
Ny tantaran'i Faust dia mety ho hita ao amin'ny literatiora anglisy ihany koa. Ilay poeta sy mpilalao tantara atao hoe Christopher Marlowe, namana akaiky an'i William Shakespeare, dia nanoratra lahatsoratra tamin'ny 1588 izay nahitana Dr. Johannes Faust avy any Wittenberg, izay reraka amin'ny fianarana mankarary dia manao fifanarahana amin'i Lucifer: Nanolotra ny fanahiny amin'ny devoly i Faust rehefa maty, raha ho valin'izay, dia manatanteraka faniriana izy isaky ny efa-taona. Ny lohahevitra lehibe ao amin'ny dikan-tantaram-pitiavan'i Goethe dia ny fandresena ny fotoana noho ny totohon'ny olombelona, ​​hialana amin'ny fahamarinana rehetra ary hiaina fahatsarana maharitra. Ny asan'i Goethe dia mbola manana toerana hentitra amin'ny literatiora alemà ankehitriny.
I Will Durant dia mamaritra ny toy izao manaraka izao:
"Mazava ho azy fa i Faust dia Goethe - na dia enimpolo aza izy roa. Tahaka an'i Goethe, tamin'ny enimpolo taonany dia nafana fo tamin'ny hatsarana sy ny fahasoavana izy. Nifamatotra tao amin'ny fanahin'i Goethe ny faniriany indroa hahazo fahendrena sy hatsaran-tarehy. Io fiheverana io dia nanohitra ireo andriamanitra mpamaly faty, nefa mendri-kaja. Faust sy Goethe dia samy nilaza hoe "eny" amin'ny fiainana, ara-panahy sy ara-batana, ara-filôzôfika ary amim-pifaliana.
Famonoana mahery vaika
Ny ankamaroan'ny mpaneho hevitra dia mahatsikaritra ny fiheverana feno avonavona nataon'i Faust momba ny herin'Andriamanitra. Marlowes Ny tantara mampalahelo an'i Doctor Faustus dia manomboka amin'ny mpilalao fototra manao tsinontsinona ny fahalalana azony tamin'ny alalan'ny siansa efatra (filozofia, fitsaboana, lalàna ary teolojia). I Wittenberg dia mazava ho azy fa ny zava-nitranga teo amin'ny manodidina an'i Martin Luther ary ny feo izay nanakoako dia tsy azo odian-tsy hita. Ny teolojia dia noheverina ho "Ny siansan'ny Mpanjakavavy". Fa inona no hadalana ny mieritreritra fa efa nanenika ny fahalalana rehetra azo ampianarina. Ny tsy fahampian'ny faharanitan-tsain'i Faust sy ny toe-tsain'i Faust dia nampihemotra ny mpamaky maro tamin'ity tantara ity.
Misongadina eto ny taratasin’i Paoly ho an’ny Romana, izay hitan’i Lotera ho fanambarany momba ny fahalalahana ara-pivavahana: “Ary satria nihevitra ny tenany ho hendry izy, dia tonga adala” ( Rôm. 1,22). Tatỳ aoriana i Paoly dia nanoratra momba ny halalin’ny harena sy ny harena tsy maintsy iainan’ny olona iray rehefa mitady an’Andriamanitra ny olona iray: “Endrey ny halalin’ny harena sy ny fahendrena sy ny fahalalana an’Andriamanitra! Tsy takatry ny saina ny fitsarany ary tsy takatry ny saina ny lalany! Fa “iza no nahalala ny sain’i Jehovah, ary iza no mpanolo-tsaina Azy”? (Rom 11,33- iray).
Mahery fo mampalahelo
Misy fahajambana lalina sy matavy ao Faust izay midika fa ny tendrony roa sosona. Tiany ny fahefana, mihoatra ny harena rehetra eto an-tany. Manoratra toy izao i Marlowe: "Tokony hanidina any Golde izy ireo, any India, maka ny perla Orient avy any an-dranomasina, Peek mamakivaky ny zoro tontolo vaovao rehetra, hamoa voankazo mendri-kaja, mangatsiaka ny andriana mahasoa; tokony hamaky ahy ny fahendrena vaovao ianao, hampahafantatra ny lalànan'ny mpanjaka: "Marlowes Faustus dia nosoratana ho an'ny sehatra ary noho izany dia mampiseho ilay mahery fo mahatsiravina izay te hahita, hamantatra, hitombo ary hahalala ireo tsiambaratelon'ny tontolo fantatra sy tsy fantatra amin'ny fomba mahavariana. Rehefa manomboka mandinika ny toetry ny lanitra sy ny helo dia i Mephisto, ilay mpitondra hafatr'i Lucifer, dia nanakana ny fifaninanana amin'ny horohorontany.Mandeha amin'ny endrika romantika any Eropa ny dikan-teny mihetsiketsika nataon'i Goethe ary noho izany dia mampiseho totohondry lafo vidy kokoa izay mampiseho ny fisian'Andriamanitra ao aminy Izy no nidera ny andriamanitra ho zavaboary maneran-tany sy voatahiry rehetra, satria ho an'i Goethe, ny fahatsapana dia ny zava-drehetra.Manakiana ny mpitsikera ny Goethe's Faust tamin'ny taona 1808 ho toy ny tantara sy ny tononkalo tsara indrindra novokarin'i Alemaina manana. Na dia tarihin'i Mephisto any amin'ny farany aza i Faust dia be dia be ny ho azo avy amin'ity tantara ity. Miaraka amin'i Marlowe, ny fiantraikany mahatsiravina dia maharitra ela ary mifarana amin'ny fitondran-tena. Nandritra ny filalaovana dia nahatsapa ny ilana hiverina any amin'Andriamanitra i Faustus ary hiaiky ny fahadisoany teo anoloany sy ny tenany. Tamin'ny hetsika faharoa dia nanontany i Faustus raha tara loatra ka izy ary manamafy izany tahotra izany ny anjely ratsy. Mandrisika azy anefa ny anjely tsara ary miteny aminy fa tsy tara raha miverina amin'Andriamanitra. Namaly ilay anjely ratsy fa ny devoly dia hamiravira azy raha miverina amin'Andriamanitra izy. Fa ny anjely tsara tsy mamela mora foana ary manome toky azy fa raha miverina amin'Andriamanitra izy dia tsy hisy volo hiondrika. Anyupon Faustus dia miantso avy amin'ny fanahy lalina indrindra an'i Kristy ho Mpanavotra azy ary mangataka azy mba hamonjy ny fanahy nampijaliana azy.
Avy eo dia niseho niaraka tamin'ny fampitandremana sy fanaingoana mahafinaritra i Lucifer mba hampifangaroana ny dokotera voaofana. Mampahafantatra azy amin'ny ota mahafaty fito nataon'i Lucifera: fieboeboana, fitsiriritana, fialonana, hatezerana, fitsiriratsirana, hakamoana sy faniriana. Marlowe's Faustus dia variana loatra amin'ireto fahafinaretan'izao tontolo izao ka miala amin'ny lalana hiverenany amin'Andriamanitra. Ity no tena toetry ny tantaran'i Marlowe Faustus: Ny fahotana Faustus dia tsy vitan'ny fahatongavany ihany fa eo amin'ny lafiny ara-panahy rehetra. Ho an'i Dr. Io fahefana miavaka io no anton'ny nahafaty azy, Kristin Leuschner of the Rand Corporation, satria "tsy afaka mahita Andriamanitra iray lehibe i Faustus hamela heloka azy noho ny asa nataony".
Amin'ny lafiny samihafa amin'ny lalao Marlowe, ny naman'i Faustus dia mandrisika azy hibebaka, satria mbola tsy tara loatra. Saingy jamban'ny finoany tsy misy i Faustus - ny Andriamanitry ny Kristianisma dia lehibe noho izay azony eritreretina. Efa lehibe mihitsy aza izy ka mamela azy.Academic Dr. Faustus, izay nanalavitra ny teolojia, dia tsy nahavita nianatra ny iray amin’ireo fotopoto-pitsipika lehibe indrindra ao amin’ny Baiboly, manao hoe: “[Ny olona] dia mpanota avokoa ka tsy manana voninahitra tokony hananany eo anatrehan’Andriamanitra, ary hamarinina amin’ny fahasoavany amin’ny alalan’ireo tsy mendrika ny Famonjena. izay tonga tamin’ny alalan’i Kristy Jesosy” (Rom 3,23f). Voalaza ao amin’ny Testamenta Vaovao fa nandroaka demonia fito tao amin’ny vehivavy iray i Jesosy, ary lasa iray tamin’ireo mpianany nahatoky indrindra izy (Lio. 8,32). Na inona na inona fandikan-tenin'ny Baiboly vakintsika, ny tsy fahampian'ny finoana ny fahasoavan'Andriamanitra dia zavatra iainantsika rehetra, ary matetika isika no mamorona ny endrik'Andriamanitra. Fohy loatra anefa izany. Tsy hamela ny helony i Faustus, koa ahoana no ahafahan’ny Andriamanitra Tsitoha manao izany? Lojika izany - fa lojika tsy misy indrafo.
Famindram-po ho an'ny mpanota
Angamba ny tsirairay avy amintsika dia hiaina an'io fomba io. Avy eo mila mandray am-po isika satria mazava ny hafatry ny Baiboly. Na iza na iza karazana fahotana azo avela, afa-tsy ny fanoherana ny Fanahy Masina - ary io fahamarinana io dia ao amin'ny hafatry ny hazo fijaliana. Ny hafatry ny vaovao tsara dia ny sorona nataon'i Kristy ho antsika dia mihoatra lavitra noho ny isan'ny zavatra rehetra niainantsika sy ny fahotantsika rehetra nataontsika. Misy olona tsy manaiky ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra ary avy eo manome voninahitra ny fahotany: "Ny fahotako dia lehibe loatra. Tsy afaka mamela ahy na oviana na oviana Andriamanitra. "
Diso anefa izany fiheverana izany. Ny hafatry ny Baiboly dia midika hoe fahasoavana - fahasoavana hatramin’ny farany. Ny vaovao tsaran’ny filazantsara dia ny famotsoran-keloka any an-danitra dia mihatra amin’ireo mpanota ratsy indrindra. Ny tenan’i Paoly mihitsy no nanoratra toy izao: “Marina tokoa izany sady teny miendrika ny finoana fa tonga teto amin’izao tontolo izao i Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota, ary izaho no voalohany tamin’ireny. Fa izany no namindrana fo tamiko, satria Kristy Jesosy no nanehoan’i Kristy Jesosy ahy ny faharetana voalohany indrindra ho fianarana ho an’izay mino Azy hahazoany fiainana mandrakizay.”1. Tim1,15- iray).
Nanohy ny fanoratana toy izao i Paoly: “Fa teo amin’izay nahalehiben’ny ota no vao mainka mahery kokoa ny fahasoavana.” ( Rôm. 5,20). Mazava ny hafatra: maimaim-poana foana ny lalan’ny fahasoavana, na dia ho an’ny mpanota ratsy indrindra aza. Rehefa Dr. Faustus ihany no tena nahatakatra izany.
nataon'i Neil Earle